Fanodinana ny akora plastika
Raha akora fanodina ny nanamboarana ilay plastika, dia tsy midka avy hatrany fa azo ahodina eo an-toerana ny plastika izay avy nampiasaina. Izany tokoa!!! ny fanodinana ny akora plastika avy nampiasaina, ao anatin’izany ny fako avy any an-tokantrano, dia miankina amin’ny mpihazaka maromaro:
ny fisian’ny tambazotra fanodinana manomboka any amin’ny fanangonana, fifantenana, fitaterana, ary ny ozinina fanodinana isaky ny sokajy;
ny fisian’ny fepetra teknika amin’ny fanodinana sy ny tombotsoa ekônomika avy amin’ny fanodinana;
ny tinady sy vidy eo amin’ny tsenan’ny akoram-bokatra;
ny fitaizana ny olom-pirenena sy famporisihana avy amin’ny tompon’andraikitra;
Ny firenena tsirairay, na ny tanàna ao amin’ilay firenena, dia samy mametraka fitsipika amin’izay karazana akora plastika fanodina arakaraka izay tambazotra sy ny fepetra misy eo an-toerana. Araka izany, ny akora fanodina amin’ny toerana iray dia mety tsy azo atao any amin’ny toerana hafa ary mety ahazoana sazy.
Ny tsara ho fantatra momba ny PET (sokajy #1)
Ny PET dia pôlimera azo avy amin’ny etilena glikôla sy asidra tereftalika. Ny vovoka azo avy amin’ireo no afanaina ary omena izay bika ilaina rehefa mitsonika. Tany antenantenan’ny taona efapolo no nanaovana ny fandravonana PET voalohany ary tany amin’ny fiandohan’ny taona fitopolo no nipoiran’ny teknôlôjia mandasitra tavoahangy PET araka ny hita ankehitriny. Tany amin’ny faramparan’ny taona fitopolo kosa ny nahitana ny fomba fanodinana ny tavoahangy PET..
Ny fikarohana sy fandalinana ary fanandramana siantifika maro nandritra ny telopolo taona mahery dia manambara fa azo antoka ny PET rehefa ampiasaina amin’izay antony nanamboarana azy. Ireo foibe sy masoivoho manana fahefana any amin’ny firenena lehibe sy mandroso, toy ny US FDA, Health Canada, ary ny European Food Safety Authority, dia nanome alalana ny fampiasana azy amin’ny sehatra maro toy ny famonosana sakafo na zava-pisotro na akora fanadiovana samihafa, fanafody, sy amin’ny fitsaboana, sns.
Mafy sy maozatra, tantera-kazavana, mahatohitra fikaokan’ny mikrô-ôrganisma, maivana, tsy mora vaky toy ny fitaratra sns. dia isan’ny toetran’ny PET ka mahatonga azy ho akora ekônômika amin’ny famonosana sakafo sy zavam-pisotro. Azo averina ampiasaina tsara araka izany ny tavoahangy PET rehefa avy nodiovina tsara amin’ny rano sy savony, ary namainina tanteraka. Tsy tsara kosa anefa ny mampiasa azy raha misy kiaka ny atiny satria mety mitazona bakteria.
Fanodinana tavoahangy PET
Ny PET no akora plastika fanodina betsaka indrindra amin'izao fotoana noho izy azo averimberina ahodina. Saika ny tanan-dehibe rehetra amin’ny tany mandroso dia manana ny tambazotra fanodinana ny akora plastika PET. Tezaina sy entanina koa ny mponina amin’ny fanangonana ny PET, ary azo saziana izay tsy manaraka ny torolalana.
Ny tavoahangy PET voahodina dia ahazoana manamboatra tavoahangy PET vaovao na koa vokatra hafa toy ny kofehy fanao karipetra na akanjo, kitapo fatoriana, akanjo entina amin’ny ririnina na avy orana. Ny orinasa vaventy toy ny mpanamboatra fitaovana ho an’ny fiara koa dia isan’ny mpanjifa ny akora PET voahodina.
Ireto ny dingana lehibe arahin’ny fanodinana tavoahangy PET:
An-tapitrisa maro ny tavoahangy PET mitosaka eo amin’ny tsena, fenoin’ny mpamokatra sy ampiasain’ny mpanjifa. Ny PET no akora matetika fampiasa indrindra amin’ny tavoahangy ho an’ny rano, ranom-boankazo sy zava-pisotro misy gaza.
Ny ankamaroan’ny firenena lehibe dia mametraka toerana manokana anangonana ny tavoahangy PET avy nampiasaina. Ny magazay lehibe ohatra dia tsy maintsy manana izany toerana manokana izany. Toy izany koa ny tanàna lehibe sy ny boriborintany, ny sekoly sy ny hôpitaly, ny gara sy ny seranam-piaramanidina, ny toerana fialamboly, ny kiôska, sns.
Ny tompon’andraikitry ny fanodinana dia mampiasa lôjistika mavesatra sy mahomby amin'ny fitaterana ny tavoahangy PET avy eny amin’ny toeram-panangonana, mankany amin’ny toerana fifantenana.
Fantenana sy avondrona araka ny lokony ny tavoahangy PET ary mandalo sivana sy fanadiovana voalohany anesorana izay raha hafa tsy miditra amin’ny tambazotran'ny fanodinana. Fisahana sy terena avy eo ny tavoahangy PET ary afatotra ho vongana mahatratra 200 ka hatramin’ny 300kg vao taterina mankany amin’ny orinasa mpanodina.
Sarahana tsirairay ny tavoahangy PET voafisaka eto ary ampandalovina milina manala ny sisa metaly sy ny etikety misy viraty(*). Avy eo tetehina madinika ary ampidirina amin’ny milina mitsoka manala ny ambina etikety tavela. Ampandroina amin’ny rano avy eo ilay PET voatetika ka ny potiky ny sarony mitsingevana satria maivana fa ny tetika PET mavesatra kosa milentika. Diovina amin’ny rano misy tsora fandiovana avy eo ary afanaina anaty lafaoro mahatratra 197-207 degrés. Io fomba io no manadio ny tavan’ny PET voatetika sy manala izay raha hafa mbola mety tavela. Kobanina farany ny tetika PET ary amainina. Refesina amin’ny lazera ireo tetika PET voadio, sady manala izay raha mbola tavela farany ihany koa. Potika PET madio izy manomboka eto ary azo ampiarahana amin’ny akora fanamboarana akora PET vaovao.
Akora PET vaovao
Sokajin’ny akora fototra ilay potika PET voahodina ary jifain’ny orinasa mpanamboatra akora PET ho an’ny orinasa mila famonosana PET. Afanaina hatrany amin'ny 250 degrés ilay potika PET hitsonika ary omena izay bika ilaina.
Mety mbola mandalo dingana fanampiny ilay akora PET vaovao vao tonga any amin'ny tena bika farany. Ny akora preform ohatra dia ny tendan'ilay tavoahangy PET hipetrahan'ny sarony ihany no vita fa ny vatany dia atao toy ny tioba fotsiny aloha. Mora tanterina io preform io satria tsy mibahana toerana, ary any amin'ny orinasa mpameno ilay tavoahangy vao abontsina ilay tioba vatany ho lasa bikana tavoahangy.
Akora efa nahodina ?
Tsy voatery ho midika hoe plastika efa nahodina no nanamboarana ilay akora vaovao. Ny mpanamboatra rahateo dia tsy voatery hilaza na akora voahodina na misy ampahany ny akora nanamboarana azy.
Ny tavoahangy plastika avy nampiasaina dia azo ahodina zavatra hafa toy ny kofehy, kitapo, seza plastika, famonosana, fitoerana finday, kiraro sy akanjo entina amin’ny fanatanjahan-tena, kara-bola, TV fisaka, sns.
Teboka Maitso (Green Dot)
Antsoina koa hoe EcoEmballages, io eva io dia hita amin’ny ankamaroan’ny famonosana isan-karazany kanefa tsy midika velively fa azo ahodina ny akora nanamboarana ilay famonosana (matetika akaikiny eo ny toro-lalana amin’ny fomba fanariana na fifantenana azy). Ny eva Teboka Maitso dia milaza fa mandoa karazana hetra ho amin’ny tambazotran’ny fanodinana ilay orinasa mpanamboatra ny vokatra fonosina.
Ny tavoahangy PET misy marika manokan'ny PET-Recycling, toy ny fasiana rano na ranom-boankazo, ihany no azo ahodina ary raisina eny amin’ny toerana fanangonana voatokana misy io eva io. Ny tavoahangy nisy menaka na vinaingitra kosa na dia vita amin’ny PET aza dia tsy azo angonina satria manasarotra ny fanadiovana amin'ny fanodinana.
Pejy teo aloha: Akora plastika
Manasa anao hitafasiry momba ny loha hevitra sy ireo andininy nozaraina teto.
(*) Ny resaka mivoana, tsy maotina, na maniratsira dia azon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny Fanoro esorina. Ilaina kosa anefa ny tsikera mitombina hanatsarana ny aty sy ny bikan'ny takelaka.
Copyright © 2015 fanoro. All Rights Reserved.